Ka anyị kwuo maka ikike BSD | Site na Linux
Ka anyị kwuo maka ikikere BSD
obi ike | | Ndị ọzọ
N'ime ikikere sọftụwia n'efu anyị na-achọta ikikere GPL (Gnu Pmkpuru License) na ụdị ya niile na BSD (BNnenna Software Donyinye).
GPL anaghị ekwe ka anyị mechie usoro ma ọ bụ ngwa nke na-eji ụdị dị iche iche nke GPL na anyị ga-ekesa koodu isi mmalite.
Iwu a nwere obere ma yabụ ihu abụọ ebe ọ na-eti mkpu nnwere onwe site n'elu ụlọ ma ọ gaghị ekwe ka anyị mechie usoro ahụ.
N'aka nke ọzọ, BSD na-enye anyị ohere ịhụ koodu ahụ ma gbanwee ya, mana ọ na-enyekwa anyị ohere imechi sistemụ ma ọ bụ ngwa ahụ.
Dị ka ọ dị, nke a na-agụ nke onye na-agbachitere oghere na-abụghị nke onwe, mana nnwere onwe na-agụnye inwe ike imechi usoro anyị.
Otu ihe atụ nke a bụ apụl sistemụ, sistemụ a bụ BSD, Darwin kernel bụ ngwakọta nke Mach1 ya na ụfọdụ BSD ma ọ bụ n'efu, agbanyeghị na akụkụ ndị ọzọ nke sistemụ ahụ mechiri emechi.
ANYA, na nke a anaghị m ekwu na GPL bụ ikike na-adịghị mma, ana m ewere ya dịka ezigbo ikike ebe ọ na-enye anyị nnwere onwe karịa ndị nke onwe, mana BSD bụ ezigbo ngwanrọ n'efu ebe ọ na-enye anyị ohere ihe niile.
Kemgbe ụwa, ikike a enweela ọtụtụ mgbanwe:
4 nkebi ahịrịokwu BSD
3 nkebi ahịrịokwu BSD
Mgbe ahụ enwere ụdị, ihe akpọrọ 2-clause ma ọ bụ BSD dị mfe nke FreeBSD na-eji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Ka anyị kwuo maka ikikere BSD
Ihe 78 kwuru, hapụ nke gị
Eziokwu na-adọrọ mmasị, nkọwa akọwapụtara nke ọma ihe dị iche na ha abụọ. Agaghị m echefu ya, ịdị adị nke ọtụtụ akwụkwọ ikike adịworị na-akpali mmasị, maka ihe kpatara ya.
PS: Anaghị m eji ubuntu oO bụ aghụghọ nke onye ọrụ m: O
Kpamkpam ka i bughi ubuntoso agaghi m eme gi ihe hahaha
😀 site na nke zoputara m, hehehe
Itinye ubuntu ibu gị ubuntu / M kpọrọ asị - »#pendejos #lol
«Are na-adịghị ubuntoso Agaghị m achọ gị aghụghọ»
Aghọtara m na ọ bụghị gpl kama ihe a na-akpọ copyleft na-amanye nkesa na otu ọnọdụ mbụ ahụ, mana n'ezie abụghị m nke ọma banyere nke a ...
Ma ọ dịkarịa ala, GPL anaghị ekwe ka emechie koodu ahụ, nke bụ iji wepu nnwere onwe
Site n'echiche m ọ ga - abụ iji hụ na koodu ahụ ga - abụ n'efu, nke bụ ebumnuche ya. Ewezuga nke a, ikikere BSD kacha mma.
Mmasị, mana ihe na-arịa ọrịa.
Ọ bụrụ na BSD enye gị nnwere onwe ahụ imechi sistemụ ahụ, ọ ga - abụ na anaghị egbochi nnwere onwe maka ndị ọzọ ịkwaga ihe ka mma? Ikekwe nke ahụ bụ ebe GPL dabeere ka koodu ahụ bụrụ n'efu n'otu ụzọ ahụ maka ndị ọzọ, ma, si otú a na-emekọrịta ihe na ibe ha na ihe niile.
Zaghachi Anụ ọhịa
Nsogbu bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta na mmepe nke ihe nwere ikikere GPL, iwu ji gị kesaa koodu isi.
Ọ bụrụ na m rụkọta ọrụ yana ihe a kpụrụ n’etiti ihe m nyere na ndị ọzọ na-enye, ọ ka diri onye ọ bụla, gịnị kpatara nsogbu ga-adị ebe ahụ? Ma obu obu nsogbu a n'onwe ya, bu na ichoro iwere koodu nke ndi ozo ma nwee ike imechi ya site na itinye ihe m maara ma ghara isoro onye obula kesara ya ... obughi ọdịmma onwe onye n'anya nye ndi obodo, ọbụlagodi ma ọ bụrụ ọ bụ nnwere onwe n'onwe ya?
O nwere ike ịbụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, mana ọ bụ otu ihe ka amanye ịkekọrịta mgbanwe ndị ị mere na ihe ọzọ iji kesaa mgbanwe ndị ahụ n'afọ ofufo. Copyleft na-amanye gị ịkekọrịta, nke ahụ bụ ihe GPL nwere ma ọ bụghị BSD.
Enwere naanị ihe dị iche. Echiche nke Free Software, dị ka Richard Stallman welitere, bụ sọftụwia nwe, ya bụ, imechi koodu ahụ, bụ "ihe ọjọọ" na obodo. Maka Stallman, nke ahụ bụ ihe m kwenyere, nnwere onwe imechi koodu abụghị ezigbo nnwere onwe ma ọ bụrụhaala na ọ na-egbochi ndị ọzọ ịnweta mgbanwe ahụ. Nke ahụ bụ echiche nke copyleft, ya bụ, ọ bụ nchedo obodo site na onye na-erigbu ihe obodo ahụ mere.
Ka anyị hụ mba mba na mba! GPL na-amanye gị ịkesa koodu nke ọrụ ahụ oge niile, BSD na-enye gị ohere ịgbanwe nke mbụ ma kesaa ya dị ka koodu mechiri emechi ma ọ nweghị ikpe, m kwughachiri, ọ dịghị, ọ na-enye gị ohere imechi koodu mbụ ị wepụtara n'okpuru ikike, mana naanị nke ahụ ị gbanwee site na ikike ahụ. Koodu nke mbu bu n'efu.
Otu ihe gbaturu m, m ga-achọ iwepụ obi abụọ a.
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na m ewere koodu soft_A (yana ikikere GPL), dezie ya ma hapụ ya dị ka soft_B (yana ikikere BSD na koodu mechiri) ... a na-ahapụ ya obodo na site na soft_B1, B2 nwere otu ikikere ahụ, ọ gaghịzi enwe ibu ọrụ ịhapụ koodu ahụ? Ka ọ bụ na mgbe ị na-ekwu "koodu mbụ" ị pụtara ikike GPL, n'ihi na o doro anya na nke mbụ ahụ na-anọgide na akwụkwọ GPL na ụdị ya na ikikere ndị ọzọ.
Akụkụ ahụ bụ nke m na-aghọtachaghị nke ọma, ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọwapụta ya karịa, m ga-enwe ekele maka ya nke ukwuu.
N'ihi na ọ bụrụ na otu ị sị, bụ na m nwere ike iwere koodu nke soft_A yana ikikere GPL wee si ebe ahụ mechie koodu ahụ na mgbanwe m ma hapụ obodo ahụ, ọ ga-abụ ntakịrị ma ọ bụ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị iji mee koodu a na-ahapụ kpamkpam maka obodo dum ma ghara ịkwado ihe kpatara ịnọgide na-etolite ọnụ.
Mana ha na-eji ohere mepere emepe mepụta sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ. Ha na - akwalite oru ngo a site na mpako anọ ma rite uru na mbọ nke ndị ọzọ (enweghị isi maka ndị bu n’obi ịkwalite ngwanrọ na - akwụghị ụgwọ).
@Wild, GPL anaghị ekwe ka mgbanwe ikike ahụ gbanwee. BSD na-eme.
Ka anyị hụ ọhịa m kọwaara ya nke ọma, n'ihi n'ezie, koodu gpl m chere na ị gaghị enyefe ya bsd dị ka nke ahụ n'ihi ee. Ihe Nlereanya:
Create mepụtara ihe nchọgharị ọhụrụ akpọrọ Wildfox ma hapụ ya n'okpuru ikikere bsd gbanwere (ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya na ikike bsd mbụ), ị ga-abanye na nsụgharị 7 ma mechaa kpebie ịhapụ nsụgharị 8 dị ka koodu mechiri emechi, koodu niile ruo nke 7 ga-abụ enwere onwe, site na mbipute 8 a ga-emechi ya, ọ bụ ezie na ị ga-akpọrịrị onye mepụtara koodu maka nsụgharị ndị gara aga, na nke a n'onwe gị.
Ihe ị ga-ekwu na ụlọ ọrụ na-enye ha akara 4, ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị, ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị ahụ etinyeghị ọtụtụ nde euro na mmepe, koodu ahụ ị mepụtara nwere ike ịdaba na nchefu.
Mana site na igbanwe cocks anọ ị nwekwara ike imechi koodu ahụ, pandev. N'ihe m maara, ọ dịghị nkebula nke na-amanye gị itinye X koodu ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ itinye ego Z nde euro iji mechie ya.
Ihe oru ndi mmadu nwere ikike nke BSD, nke otutu ndi oru aka meputara, nwere ike ibu 'ihe ohuru' mechiri emechi n'ime sistemụ arụmọrụ X site na-agbanwe akara, aha, na obere ihe ndị ọzọ. Na ikikere GPL nke na - enweghị ike ime. Ọ bụrụ na CUPS nwere ikikere BSD, Apple ga-emechi ụlọ mmanya n'otu ntabi anya.
Ahem, ka anyị hụ, ọ bụ Apple nyere iko iko ahụ, ọ bụ maka ọdịmma, ana m asị, ọ bụrụ na ha chọrọ ha gaara etinye akwụkwọ ikike ọzọ site na mbido.
Kpọrọ ihe? Ekwenyere m na ha goro onye nrụpụta ọrụ ahụ mgbe enyerela GPL ikike. N'ezie, ezigbo nwoke ahụ kwara ụta n'ihi enweghị koodu ahụ (ma ọ bụ n'efu).
Dị nnọọ ka ndị Wine kwara ụta maka iji ikikere X11 (nke yiri BSD), ha jiri ndị Cedega mee ihe n'ịzụ ahịa. Ha egbughi oge ịgbanwe gaa GPL.
Na-ekwu na enweghị m ike iji sọftụwia ahụ na-azụ ahịa ma ọ bụ gịnị? A na-akpọ ya Talibanism ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-enwe anyaụfụ na onye nwere amamihe karịa gị ma kpebie iji koodu gị nweta ego, nke ọ na-enweghị onye gwara gị ka ị ghara ime, n'ụzọ, ụbọchị mmanya nwere arụmọrụ nke cedega , n'echiche na ị nwere ike ịsị na ụfọdụ ngwa ọdịnala na-arụ ọrụ 100%, mgbe ahụ ha nwere ike ime mkpesa.
Nke a abụghị maka ndị Taliban. M na-akọwa:
Onye Mmepụta CUPS m ghọtara na ọ họọrọ ikike GPL n'ihi na ọ kwenyere na ụkpụrụ nke ngwanrọ n'efu. Akwụ apụl ahụ pụtara, zụta koodu ahụ ma goro ya ụgwọ (mana ọ nweghị ike ịgbanwe ikike). Nke ahụ bụ, ọbụlagodi ma ị kwaa ụta, ị ga-anọgide na-enyere sọftụwia na - akwụghị ụgwọ.
Ndị mmepe mmanya ga-ahọrọ akwụkwọ ikike ọzọ site na mbido, ebe a hụla na ha achọghị ka ndị ọzọ mechie koodu ha.
Ma ị na-ahọrọ GPL ma ọ bụ BSD, ị ghaghị iburu nsonaazụ ya. Ihe dị mma banyere BSD bụ na ọ na - enye gị ohere ịgbanwe ikike. Ihe dị mma banyere GPL bụ na ị na-amanye ka oghere ahụ meghee.
Obi ike, mezie: "akụkụ ndị ọzọ nke usoro ahụ"
Edere m isiokwu a ogologo oge gara aga na blọọgụ m ọzọ na achọpụtaghị m
Nke ahụ bụ afọ ole ị dị ka nke a ... na-echefu ihe ugbua ... LOL !!
Na ihe "stuffy" m na-aghọtachaghị. Ntorobịa gị / senile jargon m na-aghọtaghị.
LOL !!!! HAHAHAHAHA TOOOOMMMMAAAA !!! onye ozo bu Obi ike ... uff ... n'etiti "haño" na "harticle" ka anyi chia ochi onwu haha
Ọ bụrụ na ọ bụ otu ahụ ka ị ga-esi dee ole, na 17? Achọghị m ịma ka ị ga - esi mee ya mgbe ị toro afọ XD.
Na ọnụego a, ị ga-lara ezumike nká na 26 XD ...
Eziokwu bu na achoghi m iru 26, okwesighi ya
Akpọrọ m keyboards netwọdụ shitty a kpọrọ asị, ọ dịghị onye nwere ike iji ha dee ya.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ onye ọzọ, ọ naghị adabara m
Apple hụrụ ikikere BSD. A sị na m bụ onye na - eme ihe omume software n'efu, agaghị m eji ya, gịnị kpatara ya? N'ihi na ọ gaghị atọ m ọchị ma ọ bụrụ na ndị ọzọ ejiri akara m na-emebi ihe, na-emebi ije m na-akwado. Akwụkwọ ikike GPLv2 na-amasị m.
ma ọ bụrụ na imechi usoro ahụ, ọ na-ezo aka na imechi koodu ...
Abụ m maka GPL na imegide BSD
Ọfọn, maka ihe kpatara ikikere ndị a dị, nke ọ bụla dị IWU ịhọrọ nke kachasị gị mma 🙂 ebe a bụ nkọwa.
Oh lee Stallman si agu gi.
Echeghị m na ọ bụ ihe ziri ezi ka mmadụ were koodu efu, tinye akara atọ ọzọ na ya wee mechie koodu ahụ
echiche nke nnwere onwe dịtụ ikwu
site na iwu nke atọ, nke ọ bụla nwere ikike iwere mma wee gbuo mmadụ iri abụọ xD
Okwu obi ike
ma ihe m na-aghọtaghị, ọ bụrụ na nke a dị adị ma ọtụtụ ihe anyị na-agụ ebe a. anyị bụ ndị mmemme ma ọ bụ ndị mbido n'ime ụwa mmemme a. N'ihi na a ka nwere ụlọ ọrụ ndị raara onwe ha nye maka ịgba ụlọ n'ụlọ ma ọ bụ obere mmemme mmemme maka ikike nwebisiinka na nwebisiinka ahụ ha kwuru.
Anyi aghaghi ime ka ikike ihe omuma ya di iche iche.
Ana m enye gị ederede ahụ http://noticiaspe.terra.com.pe/tecnologia/noticias/0,, OI5322396-EI12471,00-The + agha + nke + nchọpụta Kemịkalụ + erute + obere + programmers.html
Mana amaara m ndị mmemme na mpaghara bụ ndị mechiri koodu ha, ọ bụghị ka ha ghara ịkọrọ ya ndị ọzọ ma ọ bụ iji nyere aka melite sọftụwia n'efu, ọ bụ iji chebe onwe ha, ọ bụrụ na nnukwu ụlọ ọrụ abịa gbaa ha akwụkwọ, yabụ ha anaghị emechi edepụtara site na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụrụ na ọ bụghị iji chebe onwe ya pụọ ​​na ụlọ ọrụ. Yabụ kedu ka ikikere BSB dị?
Ihe atụ ị kpọtụrụ aha na-ekwu maka ikike nchọpụta ikike. Ikike nchọpụta echiche nke a hụrụ na ngwa ahụ n'onwe ya. N'agbanyeghị etu koodu ahụ si mechie, ha ga-eyi gị egwu n'otu ụzọ ahụ. Achọpụtaghị okwu gbasara ikike nchọpụta site na imechi koodu ahụ.
Imechi usoro a dị ka izu ohi nke ndị ọzọ, ịnwere ike ịnwere onwe gị ma na-eyi nnwere onwe nke ndị ọzọ egwu.
Nke a bụ ihe m chọrọ ịbịaru, ọ bụrụ na ị chọpụta na a ka nwere igwe ojii na ikikere GPL BSD na ọtụtụ ndị ọzọ, ka anyị kwuo okwu, na anyị agaghị emetụ isiokwu ahụ aka n'ihi na ọ ga-abụ ịhapụ blog a kpamkpam, ebe ọ bụ na nke a bụ Ochicho bu ihe otutu ulo oru di nkpa na-erite uru na ya, ha na-ewute ma o bu ghara ikwe ka mmepe nke onye na - eme ihe omume (anya mmepe nke onye mmemme) M tinye ya ugboro abuo ka ha wee hu na adighi m ekwu okwu banyere mmemme. Ana m ekwu maka onwe anyị, mana ọbụlagodi na anyị chọrọ inweta ego na ọrụ anyị ọ na-esitụ ike, ọ bụrụ na m ahapụ koodu ahụ, mmadụ ma ọ bụ otu ndị mmadụ nwere ike mepee usoro ma ọ bụ egwuregwu dị mma karịa onwe anyị (cheta isi 5 chere karịa a), kedu ka anyị si asọmpi dị ka ụlọ ma ọ bụ obere mmemme mmemme, onye nwere ike ịkọwara m? . Mana, ọ bụrụ na emechie koodu ahụ, ha na-ebo ya ebubo na ọ kwadoghị ngwanrọ ahụ ma ọ bụ uto nke mmemme ndị nwere atụmatụ ọjọọ
Ọ dị mma, aga m anwa inyere gị aka ịgbari nke a ntakịrị (olile anya m ga - P).
Ihe dị iche n'etiti sọftụwia nwere ikike na sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ bụ ọkachasị n'ụdị azụmaahịa (ee, onye sị na ị gaghị eji azụmaahịa a na-akwụghị ụgwọ azụmaahịa? Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, jụọ Red Hat na dolla dolla ya ekele maka ụdị XD a. ).
Ngwongwo ngwanrọ ma ọ bụ nke mechiri emechi chọrọ ime ka ndị ọrụ hụ na ngwa ya na ngwaahịa, nke a ga-abụ ihe ma ọ bụ pekarịa ma ọ bụrụ na ọ mere ka ị kwenye na site n'ire ngwa ya, ha na-erere gị piich, ụgbọ, wdg. O doro anya na nke a agaghị ekwe omume, ebe ọ bụ na mmemme ahụ bụ ihe na-adịghị ndụ na ihe a na-adịghị ahụ anya, mana na-enweghị piich na ụgbọala ahụ, ọ bụrụ na ha bụ ngwaahịa, ugbu a, ha mechiri koodu ha maka otu ihe kpatara ya: onye nwere ike i copyomi piich ma ọ bụ ụgbọ? Onye ọ bụla ma e copomi ngwa gị? Onye ọ bụla nwere ike ime ya, ebe ọ bụ na nke a ga-ekwe omume ma ọ dị mfe ịme. Dị ka ndị mmepe ngwa nwere ihe ọzọ? Ọ bụghị n'ihi? Maka na ha onwe ha họọrọ iji ụdị azụmaahịa a. Businessdị azụmaahịa a na - eweta ihe egwu ndị a, gị dịka onye na - ahụ maka ihe ngwanrọ na - emepe emepe X, ka anyị kwuo, ihe nchọgharị weebụ, ị na - achọpụta ya ma gbalịa ire ya, kwere m na mgbe ị mere nke a, ị ga - ekpe ikpe na ngwa nke aka gị ịnwụ n’enwebeghị ìhè, n’ihi gịnị? Dị mfe, ole patenti i chere na ị "agbaala" n'oge mmepe nke ngwa gị? Ọtụtụ narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku, yabụ na ị ga-emeso otu ma ọ bụ karịa ụlọ ọrụ ndị buru ibu, dị ike ma nwee mmetụta karịa nke gị, ụlọ ọrụ ndị ga-enwe ọtụtụ narị ndị mmemme n'ime ọkwa ha yana, dịka i kwuru n'onwe gị, isi 5 chere karịa 1 Ka e were ya na ị "wakporo" otu ụlọ ọrụ: P, ụlọ ọrụ a ga - enye gị naanị ndị ọzọ 3:
<Celsius 1 Ọ bụrụ na mmemme gị dị mma, ọ ga-anapụ gị ya site na iji pọtụfoliyo ya niile nke nchọpụta ikike imegide gị, na-enye gị naanị ọnụ ọgụgụ ọnụ na nloghachi.
<Celsius 2 Ga-akwụ ụgwọ iji ikike mmuta ha, nke ga-eme ka ọnụ ahịa ngwa gị bawanye ụba, na-eme ka ọ bụrụ ihe agaghị akwụ ụgwọ.
<Celsius 3 Adịghị ere ngwa gị ma tụfuo mbọ gị.
Ugbu a, ụdị nke Free Software gosipụtara bụ ihe ndị a:
Ihe nlere a choro na ngwa gi bu isi ma obu kaadi ahia nke ahia gi ma obughi isi nkuku ya. Na nkenke, ị gaghị ere ngwa gị dị ka ngwaahịa, ihe ị ga-eme bụ ire ọrụ, dịka? Dị Mfe, ka e were ya na ị mepụtara sistemụ na-ahụ maka idobe ụlọ ọrụ izugbe, ị tọhapụrụ ya dịka sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma kesaa ya, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ kacha nta iji kesaa ya, iji nye ha ohere ịnwale ya, wdg. Ugbu a, ka anyị were na m rutere mmemme gị, m na-anwale ya ma ọ masịrị m, mana dịka anyị si mara, ọ bụghị azụmaahịa niile ka a na-eme n'otu ụzọ ahụ, a na m akpọtụrụ gị iji mee obere mgbanwe maka ngwa gị ka ọ lekwasị m anya. otu okwu ikpe, ma ọ bụ nkwekọrịta ọrụ ọrụ nkwado gị, wdg. See na-ahụ ebe isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma dabere na ụdị a?
Ihe ọzọ nke sọftụwia na-enye n'efu bụ imekọ ihe ọnụ, mmemme gị nwere ike ịdị mma, mana gịnị ma ọ bụrụ na ndị mmemme 5 nyere gị aka ịpụ? Ihe omume gị ga-adị mma, nke a bụ mmekorita m na-ekwu maka ya, kwa, ọ bụrụ na mmadụ ewere akụkụ nke koodu gị wee mejuputa ya na nsụgharị nke ha, ọ gaghị aba uru naanị maka ha abụọ, ebe ọ bụ onye mụtara n'aka gị na nke kachasị O yikarịrị ka ị ga-amụta site na ya, yana ọ ga-akpọsara gị site na ịnweta ịghọta na ọ bụ akụkụ nke koodu nke ngwa gị 😛
Ya mere, bro, ụdị azụmaahịa ị chere na ọ na-arụpụta ọrụ karịa?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọzọ, jụọ, ebe a ọ dịghị onye na-ewe iwe banyere nke a, ekele ...
Ọ dị mma, ruo ugbu a ihe niile m gụrụ m kwenyere na ikikere sọftụwia, agaghị m abanye n'ime nke kachasị mma dịka ha na-ekwu, otu ga-ahọrọ nke kachasị mma maka ọrụ gị, mana, ihe na-atụ m ụjọ bụ na Ọ bụrụ na m nye ikikere oru ngo nke 100% m, ma tinye ya na ikikere GPL ma ọ bụ BSD, m ga-enwe nsogbu na nnukwu ụlọ ọrụ.
Ọbụna karị ma ọ bụrụ na ọrụ m amalite iwepụta pennies ole na ole wee bido ito.
Maka na n’ikpeazụ, dị ka ha na-ekwu, ọ bụrụ na ị gaa ụlọ ikpe, onye meriri bụ na o nwere ego ma ọ bụ nke nwere isi karịa ya.
@Courage Enwere ọtụtụ ihe na-edoghị m anya nke ọma:
Iwu a (GPL) nwere onwe ya ma yabụ ihu abụọ ebe ọ na-eti mkpu nnwere onwe site n'elu ụlọ ma ọ gaghị ekwe ka anyị mechie usoro ahụ.
<° Kedu ihe mere ị ga - eji mechie sistemụ?
<° N'ihi na ọ bụ ihu abụọ, n'ihi na ọ dịghị ekwe ka ị na-eme "ihe niile"?
nnwere onwe gụnyekwara inwe ike imechi usoro anyị.
Enyi, inwere onwe gi iji ikike GLP, BSD ma obu mechie koodu dika ichoro, o nweghi onye na-amanye gi ime ihe obula ... Kama nke ahu, oburu na ichoro iwere oru onye ozo ma nweta uru karia imechi koodu ha. , Echere m na ị ga-eme ihe na-ezighi ezi, belụsọ ma onye nwe koodu ahụ nyere gị ikike niile. Nke a dị ka ịnwe ozi site na blọọgụ ọzọ ma biputere ya na nke gị, na-anwa iduhie mmadụ niile site n'ime ka ha kwenye na ọ bụ nke gị.
<° Ihe oyiyi ahụ ruru unyi regaytonera gịnị? Chọrọ asọmpi na papa gị Yankee? XD
<° Gini mere ikwesiri imechi sistemu?
Ọ bụghị na ọ dị mkpa ma ọ bụ nhọrọ
<° Ebe obu ihu abuo, gini adighi ekwe gi me “ihe nile”?
Maka nke ahụ
Nke a dị ka ịnwe ozi site na blọọgụ ọzọ ma biputere ya na nke gị, na-anwa iduhie onye ọ bụla site n'ime ka ha kwenye na ọ bụ nke gị.
Blog nke m nwetara ya bụ nke m, edere m ya ogologo oge gara aga na ya, ọ bụrụ na akpọghị m isi iyi ahụ.
Nwoke, ọ bụ ihe osise, n'ezie ihe m na-akatọ Sandy na-etinye ezigbo ụmụ agbọghọ na uwe bikini, ma ọ bụ tinye ha niile na post.
Ọ dị m ka enweghị nkwanye ùgwù n’ebe ụmụ nwanyị nọ.
Nwoke m na-a listeninga ntị na igwe igwe, agaghị m ada dị ka nwoke ahụ hahaha
Nwoke, i chere na umuaka ndi edobere na bikini (ma obu obere ¬.¬) di nma karie ezigbo umuaka? OMFG !!!
Onwe m, achọpụtara m na ọ dị njọ nke ukwuu ịhụ eserese nke ụmụ agbọghọ "animated" nke nwere obere uwe ma ọ bụ enweghị uwe, n'ichepụta ma ọ bụ ikwubiga okwu ókè na "njimara" ha, ọ dị m ka ị ga-arịa ọrịa ma ọ bụ ihe dị otu a, ee Ha dị adị, nke ọma, onye ọ bụla ga - ama etu esi ekpe ikpe ma ọkwesịrị ma ọ bụ na ọkwesighi ...
Gafeela mkpakọrịta nwoke na nwanyị afọ 10 gara aga, nke ahụ bụ ihe na-eme gị hahahaha.
XD, ma eleghị anya, XD, kama ọ masịrị m ijikọ ihe dị adị n’ezie ihe na-adịghị ndụ 😉
Oge na-adịgide adịgide bụ ihe ha nwere, achọghị ịchụ nwanyị.
Obi ike, echere m na isiokwu nke nnwere onwe ka na-agbagwoju gị anya.
Enweghị ihe ihu abụọ gbasara ikikere GPL; ọ bụ ikike nke dabara na ebumnuche ya.
Hụ: enyereghị ndị ikikere ikikere, kama ọ bụ maka ndị ahịa. Ikwu ikikere bụ maka ndị na-azụ ahịa, obere ihe ọ ga-abụ maka ndị edemede, yana nke ọzọ.
Akwụkwọ ikike nke na-enye onye edemede ohere imechi koodu ahụ, dịka ọmụmaatụ iji zụọ ahịa ya na ụfọdụ mmachi iji kwụsị ndị ọrụ, n'ozuzu ha na-egosi na ha agakwaghị enwe ikike iji nnwere onwe, iji mụọ, gbanwee ma kesaa ọrụ ọhụrụ a. N'aka ozo, agbanyeghi na onye ode akwukwo gha enwekwu nnwere onwe, maka ndi oru ikpea software agagh enwe kwa n'efu, nihi na oga egbochi ha nnwere onwe uzo ano nke ngwanro.
N'aka nke ọzọ, chee etu ọ ga-adị gị ma ọ bụrụ na ị jiri afọ 5 mepee ihe ọ bụla nwere ikikere BSD, na mgbe ọ malitere ịmalite ewu ewu, ihe ndị a mere: ụfọdụ nwoke na-abịa na-ahụ ohere iji nweta ego, were koodu gị, ọ na-agbacha ya, na-emechi ya, wee malite ịre ahịa sọftụwia dị ka nke gị ma ọ bụ nke yiri ya, mana iji mgbasa ozi na-eme ihe ike, na-ekwupụta ya dịka a ga - asị na ọ bụ nnukwu ihe nweta nke ya (ma eleghị anya na - akwụghị gị penny).
Ọ bụrụ na ị na-eji Linux ọ bụ n'ụzọ dị ukwuu ekele GPL ikike. Ihe ikikere BSD nwekwara ebe ọ dị n'ụwa ma enwere ndị họọrọ ya n'ihi na ọ na-enye ohere mgbanwe dị ukwuu mgbe ị na-ejikọ koodu sitere na ọrụ dị iche iche iji mee nke ọhụrụ, mana GPL na-enye nchebe ka mma maka ọrụ ndị bu n'obi ịnọ n'efu, n'ihi na Ọrụ nrụpụta gụnyere ngwanrọ GPL chebere ga-ekesara ya na GPL, ọ bụ ya mere eji ekwu na ikike a nwere agwa "nje".
Ọ bụrụ n ’afọ 5 ị rụpụtaghị ihe ọ bụla ma mmadụ abịarute were koodu gị wee mechie ya, oleezi ihe ga - eme, nsogbu gị ga - abụ maka adịghị mma karịa asọmpi gị, maka ihe anyị bi na akụnụba na - akwụghị ụgwọ, ị ga - ama otu esi eji ohere eme ihe mana kama iri galik na yabasị.
Ọ gaghị enye m nsogbu ma ọlị ma ọ bụrụ na mmadụ gbanwere koodu m, naanị ịhụ na ọ bụ uru nye mmadụ n'ihi na ọ ga-eme m obi ụtọ.
Ọ bụghị na n'ime afọ 5 ị rụghị ihe ọ bụla, kama na ọrụ gị were afọ 5 wee bụrụ onye ama ama (nke bụ obere oge).
Onye ahụ ga-ekwu na ihe ọ rụpụtara na-ekwekọghị na ya, na agaghịkwa akwụghachi ndị okike mbụ ụgwọ ma melite koodu ma ọ bụ ego. Ọ bụghị nhọrọ ikike kacha mma maka sọftụwia nke mmadụ na-ekwu na ọ bụ n'efu (ma ọ bụ koodu isi koodu agaghị ahapụ).
Site na ikikere GPL sọftụwia ahụ ga-abakwara ndị ọzọ uru ma ọ dịkarịa ala onye edemede mbụ ga-enwe ikike ịhụ njikarịcha nke ọrụ nrụpụta mere iji meziwanye ọrụ nke aka ya.
Ugbu a, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ imepụta sọftụwia nwegasịrị onwe gị, ọ nweghị ihe na-egbochi (belụsọ ikekwe iwu obodo) ịme akwụkwọ ikike dịka nke a:
Sọftụwia a bụ nke m.
A machibidoro iwu ime nke a, nke ahụ na ihe ọzọ na sọftụwia a.
Naanị onye edemede nwere ike ime ihe ọ bụla ọ chọrọ na ngwanrọ ahụ, gụnyere ma ọnweghị oke: nweta data site na kọmputa ya maka ebumnuche m, mechie ọnụ ụzọ, mebie ndakọrịta azụ, wdg.
E wezụga onye wụnye ya site na ịpị ịnakwere na-enweghị ele okwu ahụ anya (omume na-agakarị), mana echere m na ka ụwa wee bụrụ ụwa ga-enwerịrị ihe niile.
Akwụkwọ ikike ndị a niile dị ka ihe mkpofu n'anya m, Aghọtaghị m ihe kpatara ndị ọrụ Linux ji nwee obi ọjọọ banyere ya, n'ihi na ọ bụrụ na ha ga-ezuru gị ya, ha ga-ezuru ya na agbanyeghị, ọ bụrụ BSD, GPL, CC ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị kọọrọ ha, ọ ga-enye gị otu ihe ahụ, n'ihi na ikpe a ga-emeri onye nwere ego karịa ya ma ha ga-enye gị akpa ahụ.
Anyị anaghị ekwu banyere ebe a banyere izu ohi, mana banyere iji iwu enyere ikikere. BSD na - enye gị ohere imechi koodu ahụ, GPL anaghị eme ya. Iwu kwadoro nnukwu ọdịiche dị n'etiti ha abụọ.
Mkpesa ndị ahụ nwere ike ịbụ eziokwu mgbe ụfọdụ, mana ọ bụchaghị mgbe niile, na agbanyeghị na ọ bụghị esemokwu iji nye obere ụdị ikike anyị họọrọ iji mepụta ọrụ ọhụụ.
Echere m na ezigbo ihe ngwọta maka nsogbu ikikere niile a ga-abụ ijikọ GPL na BSD. M na-akọwa:
1) Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ chọrọ ịhapụ koodu ntinye ma hapụ mgbanwe ahụ, a ga-ahapụ ya
2) Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ chọrọ ịmepụta koodu iyi ma mekwaa ka ọ bụrụ nke ya, ị ga-achọ na rue mgbe ọ ga-amalite ịkpọsa ya na mkpọsa mgbasa ozi nke anụ ọhịa ọ ga-eme mgbanwe zuru oke ruo mgbe ị ga-atụle na onye na-azụ ahịa nwere akara aka ya ma nye ya ohere iji ya.
Amaghị m ma ọ bụrụ na akọwara m onwe m nke ọma ma eleghi anya mmadụ ghọtahiere m, ihe m na-ekwu bụ na maka ọtụtụ akwụkwọ ikike, ihe kachasị mfe ga-abụ ikpebi "ike" onye ị kwere ka ịhapụ na onye ị na-achọghị, na ha na-ajụ gị ikike doro anya ma ọ bụrụ ndụdụ bụ mechiri emechi, oge. Ma ọ bụrụ na ha achọghị ichere ka ị gaa na nde nde arịrịọ a na-emechi emechi ị nwere, hapụzie ha ka ha nwee ndụdụ anaghị akwụ ụgwọ ikike.
1) Koodu efu, ya na nnwere onwe 4
2) ndụdụ efu, na-ekwe mgbe niile
3) ndụdụ nkeonwe, onye na-eme ndụdụ ahụ ga-ajụ onye mepụtara mmemme ahụ ka o nye ya ikike ikpebi ma onye mere ndụdụ ahụ enwetala ikike zuru oke ma tinye koodu ọhụrụ zuru oke iji were ya dị ka usoro dị iche. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-egbochi mmadụ ịgbakwunye koodu 3 na imechi koodu ahụ
GPL abụghị "ihu abụọ" (M ka nwere obi abụọ na ọ dị mma iji okwu ahụ kọwaa ihe bụ ihe ọmụma ọha na eze). GPL bụ "mara ihe ịchọrọ ma zere iwepụ ya." Anaghị m emegide BSD ma ọlị, naanị na ọ bụrụhaala na anyị nọ ebe ahụ ịhọrọ ikikere ma ọ bụ ụzọ amamihe nke dabara anyị, ọ bụ ihe nzuzu itinye àgwà ma ọ bụ omume nke mmadụ na ikikere ma ọ bụ nkwekọrịta wee kwuo maka ndị a. A maara nke a n'akwụkwọ dị ka "oxymoron", ọ dịkwa m ka ọ bụ na anyị kwesịrị ikwu karịa gbasara onwe anyị ma ọ bụghị karịa gbasara ihe anyị na-eme. iche na ee e
Na-ele ya anya otu a, GPL na-egbochi nnwere onwe gị, ọ na-agwa gị ihe ị ga - eme ma ọ bụ na ị gaghị eme, ya mere ọ bụ nkeonwe n'efu, ọ na - anapụ m nnwere onwe imechi koodu m mere. maka ebumnuche, mana naanị n'ihi na m kwenyere na ọ kachasị mma maka ya n'oge ahụ yana ịpụ na ikike nkeonwe. N'okwu a, ọ bụrụ na ị nweta ihe nwere ikikere bsd, ọ bụ ka anyị niile wee rite uru, ihe atụ bụ google chromium (bsd) na chrome ya (n'ụkpụrụ, ikikere nkeonwe)
Ihe mmadu gha gu.
Enwetụbeghị m ụdị edemede ahụ na-adịghị mma, ọ na-egosi na ị maara ihe dị ala karịa sọftụwia na-akwụghị ụgwọ.
Ihe ị na-ekwu na ikike GNU GPL bụ ihu abụọ bụ nzuzu, ọ bụghị na m na-emebiga ihe ókè, ị maghị ihe ọ bụla gbasara nkà ihe ọmụma nke ngwanrọ n'efu.
PS: Echere m na ị ga-ahọrọ ntakịrị ndị na-ebipụta akụkọ na blog.
Ọ baghị uru ikwu, ị gaghị achọ ịgụ ihe ma ọlị, ị jikwa ajọ njọ na nke ahụ.
Mgbe m gụchara “edemede” ugboro abụọ ma ọ bụrụ na a ga-akpọ ya nke ahụ, amaghị m ebumnuche ya.
O wutere m ma ọ bụrụ na m nwere obi ọjọọ, mana mgbe ị na-agaghị akwadebe a akwụkwọ na-eme ihe ọhụrụ, ị ka mma ka ị ghara ime ihe ọ bụla. 😉
Ebumnuche nke post ahụ bụ "ka anyị kwuo maka ikikere BSD" ... Ebum n'uche mezuru.
Hahahaha amaghi m ihe obula ???
More karịa gị winbuntosete.
Nye m Ee e Na-agwa m ma ọ bụrụ na m ga-ede ma ọ bụ na ọ bụghị n'ihi na ịmalite na ị naghị eziga ebe a, ị bụghị site na ndị ọrụ, ị bụ naanị otu ndị na-ekwu okwu, na-ahapụ ma ọ naghị alọghachi,
Ọ ga-abụ oge ikpeazụ m ga-agwa gị okwu dịka nke a, nke ikpeazu.
Ọ dị sachaa?
Na n'ụzọ, m Ee e gị gwa m
Ikwu na BSD dị jụụ karịa GPL dị ka ịsị na mba "A" nwere onwe na ọchịchị onye kwuo uche ya karịa "B", n'ihi na ekwere ịgba ohu na nke mbụ ma ọ bụghị nke ọzọ. Biko adabala maka ugha. Ime ka nnwere onwe anyị kwanyere adịghị ebuso ya agha.
Ha bụ ihe dị iche iche.
Nnwere onwe gụnyekwara inwe ike imechi usoro ahụ.
Ekwenyere m na ihe atụ nke ịgba ohu. Ọ dịka ịsị na ihe A nwere onwe ya karịa ihe B n'ihi na A na-ekwe ka nnwere onwe pụọ. Iji chọpụta otu ugboro ma ọ bụrụ na ntụnyere a ziri ezi, ka anyị hụ:
1) Ọ bụ iwepu nnwere onwe iji mepụta ndụdụ mechiri emechi? Ee n'ezie
2) Ya mere ikwe ka ndụdụ mechiri emechi bụ ikike, dị ka BSD, nke na-enye ohere iwepu
nnwere onwe, ya bụ, ha na-ekwu na akwụkwọ ikike ha karịrị nke ọma maka na ọ na-enye ndị ndụdụ nwere ikikere na-enweghị akwụ ụgwọ.
Ihe doro anya bụ na ọ na-esiri ike ikpebi nke a, mana hey, ngwọta kacha mma na-abụkarị nkwekọrịta. Ahụla m ọtụtụ ọrụ nke enwere ngwakọ nke koodu ikikere na LGPL ma ọ bụ BSD (ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ), yana GPL (mmemme). Nke a na-enye ohere ọbá akwụkwọ ka eji ya rụọ ọrụ nke sọftụwia, mana ọ bụghị isi ihe mmemme ahụ.
Cannot nweghị ike iji ikike a na-apụghị ịgbanwe agbanwe nke nkwupụta nke ikike mmadụ na sọftụwia, ihe atụ ahụ ị nyere ma ọ bụrụ na ọ bụ ihu abụọ.
@courage @ pandev92 Nye m, ọ dị ka ọ bụ ezigbo ntụnyere, n'ezie, ọ dị na mpaghara nwere oke. Nakwa okwu a abụghị nke m, ewepụtara m ya na wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre#Licencias_estilo_BSD.
@Courage dị ka ọ dị gị mma iji mechie sistemụ nke anyị niile mere.
Ọ bụghị ajụjụ ma ọ dị ka ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ajụjụ na GPL mebiri nnwere onwe.
Nnwere onwe dị na nsonaazụ niile, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nnwere onwe.
Wikipedia na-ekwu na ndị ọzọ na-ekwu okwu ụgha na-eji ahịrịokwu ahụ dị egwu, mana ọ bụghị ya mere na ọ bụ ahịrịokwu ziri ezi, ị nweghị ike iji ikike tunyere ihe na-abụghị ikike na nke na-esonyeghị n'usoro iwu ọ bụla, nke ahụ bụ ihe a na-akpọ ya ka o mee demagoguery otu ihe ụfọdụ ndị isi South America na-eme (chavez n'ime)
njide onwe onye dijo
Kedu ka ị ga - esi kwuo na ikikere bụ ezigbo ikikere bụ nke na - enye gị ohere imechi usoro ahụ, ya bụ, nke na - enye gị ohere iwepụ nnwere onwe n'aka ndị ọzọ? Icezọ dị mma nke ịghọta nnwere onwe, nnwere onwe iji wepụ nnwere onwe n'aka ndị ọzọ.
Ka anyi mee ka o doo anya otu mgbe, ikike BSD abughi ikike efu na BSD abughi ngwanrọ efu.
Nabata njikwa onwe gị
Ọ bụ ezie na nyochawa ya * D correctR * * ziri ezi, nkwubi okwu gị bụ na ọtụtụ ihe nrụpụta F / LOSS taa enweghị ike ọ ga-ekwe omume na-enweghị GPL - ọ bụ ya mere a ka ji ahọrọ ya.
Ugbu a ebe ị na-emehie bụ ugbu a:
GPL bu akwukwo ikike efu n'ihi na IT na-echebe nnwere onwe; Ọ bụ ezie na nghọta mbụ bụ na ọ na-egbochi ikike iji koodu emepụtara dịka ọ na-abụ abụ nye anyị, n'eziokwu ọ dịghị otú ahụ ebe ọ bụ na GPL na-ele anya n'ọdịnihu; ọ bụ ihe magburu onwe ya n'ọrụ ya nke ichekwa nnwere onwe 4 ndị SL ga-asọpụrụ.
*** N'echiche a, ihe o doro anya na ọ na-ewepụ n'otu akụkụ, ọ na-alaghachi karịa karịa n'akụkụ nke ọzọ. ***
BSD, n'aka nke ọzọ, abụghị akwụkwọ ikike karịa GPL kama ọ bụ karịa LIBERTARIAN: ọ bụ ezie na mmụọ ma ọ bụ ebumnuche nke ikikere bụ iji nye nnwere onwe kachasị na nke kachasị, nsonaazụ ya bụ ihe mgbagwoju anya, nke edoghị anya, na nke ukwuu, ejighị n'aka. *** Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ iji ghọta Nnwere Onwe bụ "nnwere onwe na enweghị mmachi zuru ụwa ọnụ inweta ihe ọmụma" mgbe ahụ BSD * anaghị ekwe nkwa nnwere onwe nnweta nnweta a na ihe ọmụma * yabụ na ọ bụghị n'ezie Akwụkwọ ikike, ikike libertarian ma ọ bụrụ -nke ọ bụghị dị mma-, Free NO. ***
Iji kwuo na BSD dị jụụ karịa GPL bụ ụgha, mmejọ jọgburu onwe ya ... mana hey, m ghọtara na ọ bụ echiche kachasị mma i nwere ike ime.
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ iji ghọta nnwere onwe bụ "nnwere onwe na enweghị mgbochi ụwa inweta ihe ọmụma"
Naanị ihe ọmụma na-eme ka anyị nwere onwe anyị, kwụụrụ onwe anyị, nna anyị ukwu ma nye anyị ohere ịkatọ nyocha, n'ihi na ihe bụ ihe mbụ _always_ na-agba mbọ imebi usoro gọọmentị aka ike ...
Nye m, ikikere nke na-enye mmadụ ohere iji ọrụ nke obodo dum, mee mgbanwe anọ ma nwee ike mechie akwụkwọ ikike nke ngwaahịa ya, ọ dị m ka ọ naghị atụnye ụtụ dị ukwuu na nnwere onwe nke ngwanrọ ahụ. Kedu ihe ọzọ, ikikere BSD na-akwalite parasitism site na ụlọ ọrụ na ịnweta ọrụ emerela. Otu ụlọ ọrụ na-ezu ohi na ngwanrọ na-emeghe ihe ma na-erekwa gị ngwaahịa nke nwere nnwere onwe ma mepee ekwesighi ịkwanyere ya ùgwù.
Akwụkwọ ikike GPL, n'aka nke ọzọ, na-enye nnwere onwe ahụ, ma ọ bụrụ na ịnwere ụlọ ọrụ gị, nke ị ga-anwa inweta uru gị site na ire ngwanrọ, ị na-arụ ọrụ ma mepụta ya, ejirila ọrụ nke obodo dum biri nke akụkọ.
Zaghachi ka achọrọ
E gosipụtara nke ọma.
Dị egwu, onye njikwa windo ọzọ dị fechaa
Ule Xubuntu 12.04 Beta2 [Nyocha]